SOMALIA: Al Shabaab oo xooga saareysa khal khal gelinta Muqdisho - Wargane News
Home Somali News SOMALIA: Al Shabaab oo xooga saareysa khal khal gelinta Muqdisho
Kooxda Al Shabaab ayaa todobaadyadii lasoo dhaafay sare u qaaday weerarada qorsheysan oo ismiidaaminta ah oo ay la beegsanayaan xarumaha muhiimka ah ee Muqdisho iyo ciidamada dowlada & kuwa AMISOM.
Weerarkii ugu danbeeyey ee kooxdan la beegsato Ciidamada Nabad Sugida oo uu Maraykanka tababaray ayaa ah mid muujinaya sare u kaca weerarada ka dhacay Muqdisho tan iyo dhamaadkii bishii hore ee December.
Weerarkii Axadii shalay ka dhacay Muqdisho ayey kooxda Al Shabaab afhayeenkeedu ku sheegay inay la beegsanayeen ciidamada nabadsugida oo ay wehliyeen saraakiil ka tirsan ciidamada Maraykanka ee tababarka siiya sirdoonka Dowlada Federaalka.
Qaraxii shalay ay ku dhinteen 4ta qof ayaa waxaa ka horeeyey kii ay Al Shabaab maalintii 25kii December la beegsatay xarunta dhexe ee ciidamada AMISOM ee magaalada Muqdisho. Weerarkaasi oo lagu beegay maalinta xuska Kirishtaanka, taasi oo looga gol lahaa in lagu argagaxiso ciidamada Ugandha ee xaruntaasi ku sugan.
Dowlada Soomaaliya ayaan weli si dhab ah faah faahin uga bixin sababta keentay sare u kaca tirada weerarada maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayey magaalada Muqdisho, xili siyaasiyiinta ay si weyn ugu mashquulsan yihiin Xukuumada uu soo dhisi doono Raysalwasaare Cumar Cabdirashiid.
Kooxda Al Shabaab ayaa had iyo goor sare u qaada weerarada noocaan ah xiliyada laga dilo saraakiishooda, waxayna weeraradan ugu danbeeyey kusoo beegmayaa kadib dilkii qaar kamid ah Saraakiisha Al Shabaab ay ku dhinteen duqeymaha diyaaradaha droneka Maraykanka iyo waliba isa soo dhiibidii Sarkaalkii u qaabilsanaa Sirdoonka.
Waxaase weli muuqata in Al Shabaab ay weli awood u leedahay inay weerar ismiidaamiin ah oo baaxadleh ka geystaan gudaha Muqdisho iyagoo adeegsanaya xog badan oo ay ka helayaan gudaha laamaha amaanka ee Muqdisho.